Booliska oo toogasho ku dilay dad burcadnimo lagu tuhmay – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska oo toogasho ku dilay dad burcadnimo lagu tuhmay
Star FM July 31, 2016
Ciidamada booliska ee ka howl gala magaalada tan Nairobi ayaa maanta toogasho ku dilay 2 qof oo burcadnimo lagu tuhmay, iyagoo gacantana kusoo dhigay 2 bastoolad oo ay ragaasi isticmaalayeen.
Raga la tuhmay oo da’deeda lagu sheegay 21 jir iyo 25 sano jir ayaa lagu toogtay xaafadda Santon oo ka tirsan degmada Mwiki ladib markii ay ka dhaga adeygeen amar ay booliska ku siiyeen in ay si nabad ah isku dhiibaan.
Cutubyo ka tirsan ciidamada booliska ee loo yaqaanno Flaying Squad-ka iyo ciidanka ka hoe taga dambiyada oo isku dhaf ah ayaa fuliyay howlgalkaasi, iyadoo ay is rasaaseyn dhex martay ciidamada amaanka iyo raga burcadda ah.
Madaxa ciidamada Flaying Squad-ka Said Mohammed ayaa sheegay in laba bastooladood ee ragaas laga helay mid ka mid ah ay ku jireen 7 xabadood oo rasaas ah halka mida kalena ay ku jireen 10 xabadood oo rasaas ah.
Mr Mohamed ayaa intaas ku daray in mid ka mid ah labadaasi bastooladood ay leeyihiin ciidamada booliska, gaar ahaan kuwa maamulka ee loo yaqaanno AP-da.
Laamaha amaanka ayaa wali wada baaritaanno ku aadan halka laga keenay hubkaasi hase ahaatee waxaa la tuhunsanyahay in bastooladdaasi laga qaatay askari ka tirsan ciidanka AP-da oo sanadkii lasoo dhaafay lagu weeraray xaafadda isku raranta ah ee Kibera ee magaalada tan Nairobi.
Taliyaha ciidamada gaarka ah ee ka hor taga fal dambiyeedyada Noah Katumo ayaa isagana sheegay in burcaddaan la dilay maanta ay qeyb ka ahaayeen kooxo caadeystay in ay falal dadka dhacabka ah lagu dhibaateeyo ka geystaan xaafadaha Syokimau and Athi River oo ka wada tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi.
← Hoogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka oo kulan la yeeshay masuuliyiinta Schoollada Garissa
Dowladda Yemen oo aqbashay qorshe nabadeed oo ay waddo Qaramada Midoobay →